प्रदेश Archives - Khabar24nepal
सुनिलस्मृति गाउँपालिका वडा नं. ५ का विद्यालयहरुमा इ हाजिरी सञ्चालन
January 25, 2020 January 25, 2020 khabar24nepalComment(0)
माघ ११, रोल्पा । सुनिलस्मृति गाउँपालिका वडा नम्वर ५ काभ्राले आज एक कार्यक्रमका विच वडा भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा इ हाजिरीको उद्घाटन, कुर्चि वितरण तथा महिला हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमको उद्घाटन अध्यक्ष घर्तीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घर्तीले भन्नुभयो, वडा नम्वर ५ ले […]
आर्थिक प्रदेश १ समाचार
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सव(इन्जिनियर घुस रकमसहित पक्राउ
January 24, 2020 khabar24nepalComment(0)
माघ १०, भोजपुर । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण शाखा भोजपुरमा कार्यरत सव इन्जिनियर (करार) प्रकाश तिवारी घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन । भुकम्प पिडितको पूनर्निमित घरको निर्माण सम्पन्न रिर्पोट बनाई दिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिई गएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । तिवारीलाई सेवाग्राहीसँग रु. […]
राष्ट्रियसभामा निर्वाचनमा प्रदेश पाँचमा नेकपाका उम्मेदवारहरु विजयी
January 24, 2020 January 24, 2020 khabar24nepalComment(0)
सागर थापा माघ ९, दाङ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि विहीवार दाङमा भएको निर्वाचनमा प्रेदश ५ मा नेकपाका तीनै जना उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।सत्तारुढ दल नेकपाबाट अपाङ्ग सदस्यमा दाङका जगप्रसाद शर्मा, महिला सदस्यमा कपिलवस्तुबाट विमला घिमिरे र अन्यबाट रुपन्देहीका गोपाल भट्टराई निर्वाचित भएका छन् । दाङका शर्मा गत प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भएका थिए । उनले […]
सागर थापा माघ १०, बाँके । कोहलपुरबाट यौन दुराचार प्रयासको आरोपमा एक ब्यक्ति पक्राउ परेका छन । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं। ११ स्थित एक होटल संचालकी ११ वर्षिय छोरीलाई यौन दुराचार गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी प्रमुख डिएसपी कुलदिप चन्दका अनुसार बालिकाको परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले […]
January 23, 2020 January 23, 2020 khabar24nepalComment(0)
माघ ९, रोङ । इलामको रोङ गाउपालिका वडा नं ६ मा चितुवाको आतंक मच्चिएको छ । केही दिनयता रातको समयमा चितुवाले किसानले पालेको बाख्रा खाएर आतंकित बनाएको हो । बिगत तिन दिन यता रोङ ६ रम्म्याङ्गका किसान लोकबहादुर चौकटेको खोरैबाट बाख्रा र खसी खाएको चितुवाले भोलिपल्ट रोङ ६ जौबारीका किसान खड्ग थापाको खसी खाइदिएको थियोृ […]
प्रदेश २ राष्ट्रियसभा चुनाबमा नेकपाकी तुलसा दाहाल विजयी
January 23, 2020 khabar24nepalComment(0)
माघ ९, धनुषा । राष्ट्रियसभाको बिहीबार भएको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर २ मा नेकपाकी तुलसा दाहाल विजयी भएकी छिन् । महिलातर्फ काँग्रेस उम्मेदवार नगिना यादवलाई पराजित गर्दै उनी विजयी भएकी हुन् । नगिनाले ४७ सय ४० मतभार ल्याइन् भने तुलसाले ५२सय ८ मत ल्याएर बिजयी भइन् ।
Banner News प्रदेश ३ समाचार
उपत्यकाबाहेक बाग्मती प्रदेशमा भोलि बिदा
माघ ९, काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशमा भोलि शुक्रबार सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यो विदा उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा भने लागू हुने छैन । बाग्मती प्रदेश सरकारले तामाङ समुदायको सोनाम ल्होसारको अबसरमा प्रदेशमा बिदा दिने निर्णय गरेको हो । गत वर्ष चैतमा बसेको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपत्यकाबाहेक अन्य […]
हराएको छोरा १२ बर्षपछि भेटिदा घरपरिवार खुसि
विवश विष्ट माघ ९, रुपन्देही । भारतमा ७ बर्षको उमेरमा सन्तोष हराएका थिए । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको विकट क्षेत्रमा बस्ने अमर बहादुर सुनार भारतको लुधियानामा काम गर्न हिडेका थिए । कुनै चलचित्रको काल्पनिक दृश्य झै लाग्ने कहाली लाग्दो घटना पनि उनले लुधियानामै भोगे । लुधियाना पुगेका सुनारले ७ बर्षीय छोरालाई रेलमा चढाउदा चढाउदै पछाडि […]
माघ ९ रोल्पा । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको नवनिर्मित कार्यालय भवनको बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच उद्‍घाटन गर्नुभयो । उहाँले उक्त भवनको शीलालेखको अनावरण गर्नुको साथै निरीक्षण समेत गर्नुभयो । समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले भवन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने महानुभावहरुलाई प्रशंसापत्र समेत प्रदान गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले समाजिक विकृति विसंगतिलाई सरोकारवाला […]
चावहिलस्थित धोबी खोलाको किनारमा नवजात शिशुको शव फेला
माघ , ९ काठमाडौं । चावहिलस्थित धोबी खोलाको किनारमा एउटा नवजात शिशुको शव फेला परेको छ । गोपीकृष्ण हल नजिकै खोला किनारमा करिब ८ दिनजति उमेर भएकी (बालिका) शिशुको शव फेला परेको महानगरीय प्रहरी बृत्त गौशालाले जानकारी दिएको छ । साल–नालसहितको शिशुको शवलाई पत्रिका र कपडाले बेरेर खोलामा फालेको अवस्थामा फेला पारिएको प्रहरीले जानकारी दिएको […]